Ilhaan Cumar oo soo saartey baaq ku aadan doorashooyinka Soomaaliya
Soomaalida-Mareykanka ayay si lamid ah u dirtay fariin ka dhan ah Donald Trump.
WASHINGTON, US – Inkasta oo mabda' ahaan la isku raacay in qoondada haweenku tahay soddon boqolkiiba, haddana dumarka ayaa wali cabanaya xilli Ilhaan Cumar ay ku baaqdey in gabdhaha la siiyo kalsooni aad u buuxda.
Xildhibaanadan ka tirsan Aqalka Sarre ee waddanka Mareykanka ayaa rumeysan in haweenka ay dalka u horseedi karaan isbedel wanaagsan.
Ilhaan oo wareysi siiyey BBC-da ayaa kalsooni fiican ka muujisay in coddeynta loo balansan yahay 2020-21 ay dumarka heli doonan jagooyin.
"Waxaan u maleynayaan gabdhaheena Mareykanka ee tartamay ee ku guuleystay in aan tusaale u noqon doono dadka jooga Soomaaliya oo ay u fahmaan in marka gabdho la doorto isbedel fiican la helaayo," ayay tibaaxdey.
Cabashooyinkii ugu dambeeyay ee dumarka muujiyeen waxaa kamid ah in aan ka qeybgal fiican laga siin guddiyadda maamulaya doorashadda; kaliya Puntland ayaa xubin ka siisay dumarka kooxda isku-dabarideysa coddeynta.
"Waxaan rajeynayaan in doorashooyinka ka dhici doona la dhiirageliyo dumarka, in nala aamino [iyo] in ay wax badan soo dhicin karaan hadii boos la siiyo," ayay hadalkeeda kusoo gabagabeysay Ilhaan oo ah 38-sano jir.
Dhanka kale, Ilhaan oo kamid ah xubnaha mucaaradsan madaxweynaha waqtiga ka dhacayo ee Mareykanka, ayaa rumeysan in uu mar walba u beegsanayo maadaama ay is hortaago dhibta uu ku hayo Soomaalida.
Donald Trump ayaa dhowr jeer wuxuu Ilhaan ku qaadey weerar dhanka afka ah, talabaadaas oo dhalisay in taageereyaashiisa ay u hanjabaan.
"Dadka Soomaalida waxaan ka codsanayaa in aniga kaliya aysan iga sugin jawaab; jawaabtooda ay noqoto in aan coddeyno oo aan ku dedaalno sidii aan madaxweyne cusub waddanka ugu heli karno," ayay xustey.
Doorashooyinka dalka Mareykanka ayaa qabsoomaya 3-da bisha November, iyaddoo ay haatan codadkooda sii dhiibteen in ka badan 50 milyan oo uu kamid yahay madaxweyne Donald Trump oo la tartamaya murashax Joe Biden.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safiiro u magacaabay Shaqsiyaad isaga ku dhaw oo...
Soomaaliya iyo Mareykanka oo kawada hadlay dedaalada deyn cafinta
War Saxaafaded 15.12.2019. 09:04
Donald Trump oo bixinaya amar saameyn xun ku leh Soomaaliya
Soomaliya 12.12.2019. 10:38
Saraakiil uu Mareykanka u tababaray Soomaaliya oo wajahaya dacwad
Soomaliya 28.11.2019. 13:47
UN: Mareykanka wuxuu caruurta ula dhaqmaa si axmaqnimo ah
Caalamka 19.11.2019. 14:38
Soomaaligii turjumaanka u ahaa hay'adda FBI-da oo dambi culus qirtay
Caalamka 10.11.2019. 07:21
Senator: Xaaladda Suuriya waxay u soo xusuusisay Soomaaliya
Caalamka 19.10.2019. 11:56
Xog naadir ah oo laga helay Shabaabkii weeraray Ballidoogle
Soomaliya 03.10.2019. 08:45